Global Voices teny Malagasy · Fantaro
Fantaro	Fiaraha-mientan'ny mpamaham-bolongana (mpitoraka blaogy – bilaogera) sy mpandika lahatsoratra mihoatra ny 300 manerantany izay miasa miaraka hitatitra aminao izay voalazan'ny bolongana sy ny fomba fampitam-baovaon'olon-tsotra hafa na aiza na aiza izany Global Voices izany, ary avahana ao anatin'izany ny fanasongadinana ny tafatafa tsy mba hita loatra any amin'ny haino aman-jery iraisam-pirenena malaza.
Global Voices no miezaka hanangona, handrafitra ary hampivoitra ny tafatafa an-tserasera ankapobe – mampitodika any amin'ireo toerana sy vahoaka adinoin'ny fampitam-baovao hafa matetika. Miasa izahay hanatsara ny fitaovana, fikambanana ary fifandraisana isan-karazany hahenoana kokoa ny tafatafa, na avy aiza izany na avy aiza.
Vahoaka an-tapitrisany no mamaham-bolongana, mandray feo ka mamoaka izany ary mampiakatra sary sy lahatsary mbamin'ny vaovao isan-karazany manerana ny gilaoby, ka raha tsy fantatrao mialoha ny toerana izahanao izany dia ho sarotra tokoa ny hahita tafa mihaja sady azo henoin-teny. Olo-mavitrika any amin'ny tontolon'ny bolongana isan-karazany any ny ekipa iraisampirenena manolo-tena ho mpanoratra sy ho tonia manokana ampaham-potoana ato amin'ny Global Voices ato.
Ny Global Voices dia mijoro ho fikambanana any Holandy antsoina hoe Stichting Global Voices, rafitra tsy miankina amin'ny fanjakana iray sady tsy mitady tombotsoa. Tsy manana birao tazamaso izahay, fa miasa ho toy ny fokonolona virtoaly hita amin'ny zara-kasin'ora rehetra, mihaona mivantana rehefa misy ny fotoana azo hanaovana izany (matetika mandritra ny Vovonana). Vatsy, fanohanana, fiaraha-miasa ary fanomezana avy aminareo no ahafahanay manentsina ny fandaniana.
Efa voadikan'ireo izay manolo-tena ho amin'ny fitenim-pirenena mihoatra ny 30 ankehitriny ny Global Voices, ka izany no mandrafitra ny tetikasa Lingua. Ankoatra izany dia manana ny vohikala Advocacy (Solovava) ihany kosa ny Global Voices hanampiana ireo olona tratran'ny sivana ny vohikalany sy ny asany fampitam-baovao any amin'ny toerana misy azy any. Manana tetikasam-panofanana ho an'ny fiaraha-monina mampiasa fitaovam-mpampitam-baovao mbola antsisin-kianja antsoina hoe Rising Voices ihany koa izahay mba hahenoana azy ireo, ka andrisihana manokana ny any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana.
Raha hamaky antsipiriany kokoa ny tetikasanay.
Ny Global Voices dia najoron'i Rebecca MacKinnon, lehiben'ny sampana fampitam-baovao CNN tany Beijing sy Tokyo sy i Ethan Zuckerman manampahaizana momba ny teknolojia vaovao sy momba an'i Afrika tamin'ny 2005 fony mpinamana tao amin'ny Berkman Center for Internet and Society tao amin'ny Anjerimanontolon'i Harvard ry zareo. Nihamasaka ny hevitra nandritra ny fihaonana iraisam-pirenen'ny mpamaham-bolongana notontosaina tao Harvard ny volana Desambra 2004 ka toy ny bolongana tsotra no nanombohany. (Indreto ny tatitra an-tsoratra sy ny raki-peo nandritra izany fihaonana izany).
Nivelatra haingana dia haingana ny Global Voices noho ny fiadidian'ny Berkman Center, noho ny fanohanan'ny Reuters sy ny MacArthur Foundation ary noho ny zoto sy ny fahaizan'ny mpandray anjara.
Ny Tanjona Ankapobe
Ao anatin'izao vanim-potoana tsy hahalalan'ny fampitam-baovao iraisam-pirenena loatra ny zavatra maro manandaja amin'ny ampahan'olona maro manerana izao tontolo izao, dia nametraka tanjona hanitsy izany fitongilanan'ny fifantohan'ny fampitam-baovao izany ny Global Voices amin'ny alalan'ny fampiakarana ny herin'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra. Mino ny fahalalaham-pitenenana izahay sy ny fahafaha-mampifandray ny olona voasarasaraka.
Maniry izahay ny:
Hampitodika ny olona hijery ny tafatafa sy vinavina an-tserasera mahaliana indrindra misongadina avy any amin'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra manerantany amin'ny alalan'ny fandrohizana lahatsoratra, sary, rakipeo, lahatsary na fomba hafa ataon'ny olona amin'ny aterineto.
Hanamora ny fanasongadinana ny hafatry ny olotsotra vaovao amin'ny alalan'ny fanazarana, torolalana an-tserasera ary ny famahoahana ny fomba fampiasana azo antoka ny fitaovana sy rindram-baiko tsy vidiam-bola mba hahafahan'ny olona maneho ny heviny .
Hisolovava ho amin'ny fahalalaham-pitenenana manerantany sy hiaro ny zon'ny olon-tsotra ho afaka mitatitra ny zavamisy sy ny heviny tsy misy tahotra na fanenjehana.
Raha te-hahalala bebe kokoa ianao dia tsidiho ny Fanontaniana Averimberina an-Kisesisesy.
Nampiana ny 06 Jona 2014 15:16 GMT
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty Pejy hafa fanampinyEkipa Tompon'andraikitra
Fanampiny Fantaro Ekipa Tompon'andraikitra